RASMI: AC Milan oo xilal cusub u magacowday Zvonimir Boban & Paolo Maldini | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha RASMI: AC Milan oo xilal cusub u magacowday Zvonimir Boban & Paolo...
RASMI: AC Milan oo xilal cusub u magacowday Zvonimir Boban & Paolo Maldini
(Milano) 14 Juun 2019 – Kubad qaabeeyihii hore ee AC Milan ee Zvonimir Boban ayaa si rasmi ah ugu soo laabtay kooxdiisii hore isagoo maamule ah markan, isagoo iskaga tegey xilkiisii ahaa Guddoomiye Xigeenka FIFA.
Boban oo loo magacaabay sarkaalka ugu sarreeya qorshayaasha kubadda cagta Milan ayaa xilka FIFA soo hayey tan iyo 2016-kii, isagoo uu kaliya ka sarreeyay Guddoomiye Gianni Infantino, wuxuuna Milan la qaaday 9 koob oo waawayn min 1991-kii ilaa 2001.
“Aad bay u adag tahay in laga tago FIFA, balse waxaan raacay qalbigayga waayo Milan waa qoyskayga, Talyaaniguna waa gurigayga. Waxaana igu jira damac ah inaan figta sare kusoo celiyo naadigan qarada wayn.” ayuu Boban u sheegay webka rasmiga ah ee FIFA.
Dhanka kale, sidii la filayayba waxaa isna lagu dhawaaqay magacaabista Paolo Maldini oo noqonaya madaxa farsamada, kaddib fasal-ciyaareed uu ahaa madaxa horumarinta istaraatijiyadda kooxda, iyadoo uu kabtankii hore ee Milan uu haatan aqbalay mas’uuliyad dheeraad ah.
Labadan halyeey ee hore ayaa lagu wadaa inuu mid miisaan kusoo kordhiyo dhanka siyaasadda kooxda, halka uu midka kale oo Maldini ah laga doonayo inuu soo celiyo haybtii kooxda oo ku dhex dhuntay natiijo xumadii sanadihii dambe.
“AC Milan waxay ku dhawaaqaysaa in Paolo Maldini loo dhiibey xilka Maareeyaha Farsamada ee Naadiga Milan, wuxuuna si dhow ula shaqayn doonaa Maareeyaha Kubadda Cagta cusub oo ah Zvonimir Boban.” ayaa lagu yiri war lasoo dhigay webka Milan.
Magacaabistan labadan nin ayaa lagu wadaa inay xigto midda macallinka cusub ee naadiga oo ah Gianpaolo iyo sidoo kale Maareeyaha Ciyaaraha oo isna loo qoondeeyay Fredric Massara.
Previous articleDHEGEYSO: Laba wadaad oo kale oo laga musaafurinayo Sweden (Tirada guud)
Next articleShirkadda HUAWEI oo ku dhawaaqday tillaabo ay ka nexeen Maraykanku!!